Isifanekiso esikhulu sikaNelson Mandela njengophawu lokubuyisana ePitoli - AFRIKHEPRI
Isifanekiso esikhulu sikaNelson Mandela njengophawu lokubuyisana ePitoli
Usuke usabela "Isifanekiso esikhulu sikaNelson Mandela njengophawu ... Imizuzwana embalwa edlule
Umfanekiso wes Nelson Mandela, ezifudumele e uphawu lokubuyisana, lesikhumbuzo ngoMsombuluko ngesikhathi likaMengameli ukudla kwaseNingizimu Afrika e Pretoria, kulandela emngcwabeni hero of the Umzabalazo olwa nobandlululo. Lo msebenzi wawubhekwa inikezwe njengoba isithombe esikhulu kunazo zonke emhlabeni ka-Nelson Mandela. Amamitha ayisishiyagalolunye ukuphakama, amathani ayi-4,5 ethusi: isithombe esibunjiwe esakhiwe ngabaseNingizimu Afrika u-Andre Prinsloo noRuhan Janse van Vuuren, sibiza izigidi ezingama-8 zamarandi (ama-689 ama-franc) futhi sivezwa njengesithombe esikhulu kunazo zonke emhlabeni nguNelson Mandela.
Ukumamatheka, ngezingubo zokugqoka, izingalo zivuleke kakhulu, umongameli wokuqala omnyama waseNingizimu Afrika ubonakala ebingelela isixuku. Inhloko yezwe uJacob Zuma ebikhona emkhosini ugcizelele ukuthi ezinye izithombe zikaMandela zimethula ngenqindi.
Ngalesi sikhathi, ukunyakazisa izingalo “kuwuphawu lweNingizimu Afrika yeningi. Ifaka lonke izwe futhi isimema ukuthi sibumbane, thina, isizwe se-Rainbow, ”wengeza enkulumweni emfishane.
I-pose iveza lokho kukaKristu uMhlengi waseRio de Janeiro, evezwe ohlangothini lwabo abaningi be-twitter.
Umsebenzi lo uthatha indawo yesinye isithombe, sikaBarry Hertzog, umsunguli weNational Party owasungula ubandlululo.
Ukwethulwa kwayo bekuhlelelwe isikhathi eside futhi kuhlangana nesikhumbuzo seminyaka eyikhulu seZakhiwo Zenyunyana, isihlalo sobumongameli, kepha ikakhulukazi ngoDisemba 16, “usuku lokubuyisana”, iholide laseNingizimu Afrika.
Izikhulu ezihlonishwayo, kubandakanya noMengameli wangaphambilini uMnuz Thabo Mbeki kanye nomzukulu omkhulu kaNelson Mandela, uMandla, kanye namakhulu abantu abangaziwa babekhona kulo mcimbi.
Kulesi sigungu, u-Erna Laubscher, wase-Afrikaner, ongowokuzalwa kwabahlali abamhlophe bokuqala, weza nodadewabo "ukuzokhuluma nabanye abantu futhi bagubha inkululeko nabo."
Abahlali bezinyosi uSizakele noThebiso Dlamini, bachaza ukuthi bafuna ukufakaza le nkathi yomlando. "Sifuna ukwazi ukutshela izingane zethu ukuthi sisekhona lapho kuvezwa khona isithombe," kusho lo wesifazane osemusha.
Okwakhe, bekunguhlobo lwesikhathi sokubamba iqhaza, ngoba, yize elinde amahora amaningi, ubengakwazi ukungena ngesonto eledlule esihlalweni sobumongameli, lapho izinsalela Nelson Mandela.
Unogwaja obekwe endlebeni yesithombe sikaNelson Mandela okufanele sisuswe
Unogwaja omncane obekwe ngababazi endlebeni yesithombe esikhulu uHulumeni waseNingizimu Afrika afuna ukusisusa: "Sifuna ukubuyisa ubuqotho balesi sibazi ngokushesha," kusho uMogomotsi Mogodiri etshela abe-AFP. -igama loMnyango Wezamasiko. Lezi zibazi ezimbili u-André Prinsloo noRuhan Janse van Vuuren bachazela abephephandaba laseNingizimu Afrika nsuku zonke ukuthi babeke lo rabi omncane endlebeni yangakwesokunene kaNelson Mandela, “njengophawu lwentengiso”, ngoba inkonzo ibatshele Kunqatshelwe ukusayina umsebenzi wabo. Ngokusho kwabo, unogwaja ubemelele isikhathi esifushane abenaso sokuqedela lesi sithombe, “haas” okusho ngesiBhulu kokubili unogwaja kanye “nokujaha”. Kepha lokhu kuthinta kancane akubajabulisi nezeziphathimandla: “Akukaze kube nesicelo esisayiniwe […] Samukelile ukuxolisa kwabo futhi sikholwa ukuthi ababazi bazosebenzisana nathi ukubuyisa ubuqotho ngalesi sibazi ”, kwembula uMogomotsi Mogodiri.
Funda kabanzi mayelana ne http://www.glamourparis.com/snacking-du-web/articles/un-lapin-place-dans-l-oreille-de-la-statue-de-nelson-mandela-va-etre-retire-22012014/22009#cDwEb99aAPibsG9r.99